Burmese taste - Iora: နင်ဘာသီးလဲ
အုိုင်အိုရာအမှတ်မှားတာဖြစ်နုိုင်တယ်။ စု က ကဆစ်သီးထောင်းပုို့ စ် မှာ ကဆစ်သီးကဖရဲသီးသေးသေးလေးနဲ့ တူပြီးကင်းပုံသီးလိုအရသာမျိုးလို့ ဆုိုထားတာမှတ်မိနေတယ်။
အင်ဒီးယန်းဆုိုင်မသွားခင် အင်တာနက်ကနေရှာတော့အဲဒီကဆစ်သီးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့အသီးကိုကဆစ်သီးလို့ အမှတ်မှားခဲ့တာဖြစ်ရမယ်။
အဲဒီမတုိုင်ခင်မှာလည်းစု တင်ထားတဲ့ပုံကိုသွားကြည့်ထားပါသေးတယ်။ စုတင်ထားတဲ့ပုံကလည်း ဖရဲသီးသေးသေးလေးတွေလိုမျိုးဘဲ။
ဒီအောက်ကပုံက အုိုင်အိုရာ ၀ယ်လာတဲ့အသီး။
ထားပါတော့ အဆုံးသတ်တော့ မနေ့ တနေ့ ကစု ဘလော့ကိုသွားပြန်ဖတ်ရင်းကဆစ်သီးငပိချက်ချက်တာသွားကြည့်တော့မှအို်င်အိုရာတင်ထားတဲ့ကဆစ်သီးဆုိုတာ
နဲ့ စု ရဲ ကဆစ်သီးပုံကမတူတာပြန်သတိထားမိတော့တယ်။
အုိုင်အိုရာကအရင်က ကဆစ်သီးကုိုလုံးဝမမြင်ဖူးဘူး။ ကြားဖူးသလုိုလိုတော့ရှိပါရဲ့ ။ ဒီတော့ အုိုင်အိုရာအမှတ်မှားတာဘဲဖြစ်ရမယ်။
နောက်အုိုင်အုိုရာ အင်ဒီးယန်းဆုိုင်မှာတွေ့ တွေ့ နေတဲ့အသီးတစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ သူကကြည့်ရတာတော့ squash မျိုးနွယ်လုိုဘဲ။ အဲဒါက ပိုပြီးစုတင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ တူသလိုဘဲ။ ဒီတခေါက်သွားရင် ၀ယ်လာပြီးထပ်စမ်းသပ်ကြည့်အုန်းမယ်။ (မှတ်သေးဘူး။း) )
တော်တော်တော့တူတယ်။ အောက်ကပုံကုိုကြည့်ပါဦး။ အလယ်ကအသီးလေးက အုိုင်အိုရာ ၀ယ်လာတာနဲ့ တော်တော်တူသလိုဘဲ။ စိတ်ထဲမှာ အုိုင်အုိုရာဝယ်ခဲ့တာ ကဆစ်သီး နုနုလေးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ အဲဒီအပြောက်ကလေးတွေနဲ့ အသီးကျတော့စုတင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ ပုိုနီးစပ်သလိုဘဲ။
အဲဒီဆုိုဒ်မှာတင်ထားတာပြန်ကူးပြီးတင်ထားပေးပါတယ်။ ဖတ်ချင်လည်းဖတ်ရအောင်လို့ ပါ။
These cucumbers are sweeter than other varieties and do not need to be peeled. They go well in salads but in India they are most often cooked as an ingredient in recipes or made into pickles and chutneys.(Source: http://www.clovegarden.com/ingred/cucumb.html)
ဒီအောက်ကပုံက စု တင်ထားတဲ့ပုံပါ။ အုိုင်အိုရာ ကဆစ်သီးလုို့ ထင်ထားခဲ့တဲ့အသီးလေးတွေကလည်း ဖရဲသီး လိုလို ကင်းပုံသီးလိုလိုဆုိုတော့ စုအသီးလောက်မရင့် သေးပဲ နုသေးတာလို့ ထင်ခဲ့တာလည်းပါတယ်။ ကုိုယ် ခု စုတင်ထားတဲ့ပုံကိုသေသေချာချာပြန်ကြည့်တော့ သိပ်မတူဘူးဆုိုတာသိလာတယ်။
ကုိုယ့်စီလာဖတ်တဲ့ နှင်းယု လည်းကုိုယ့်ပုံကုို ကြည့်ပြီးကဆစ်သီးအဖြစ်နဲ့ ထောင်းစားတာကောင်းတယ်တဲ့။(နှင်းယု..ရေ ကဆစ်သီးမဟုတ်ဖူးထင်တယ်။ မသေချာဘူး။ ကဆစ်သီးလို့ မမှတ်နဲ့ တော့နော်။)
ကုိုယ်မသေချာတဲ့အတွက် တင်ထားတဲ့ ပို့ စ်အဟောင်းမှာ ကဆစ်သီးလို့ တင်ထားတာတွေ ကိုကဆစ်သီးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အသီးလို့ ပြန်ပြင်ပါမယ်။ အဲဒါကဆစ်သီးဆုိုတာမသေချာလို့ ပါ။ တခြားသူတွေကို ကုိုယ့်စီကနေ အမှား(သုို့ )မသေမချာ မသိသွားစေချင်လို့ ပါ။ မသေချာတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
..... ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ
(Source: http://teeterboard15.rssing.com/chan-8893854/all_p2.html )
(စု ရေ..စု ပုံလေးတွေစု ရဲ့ လင့်နဲ့ တွဲတင်ထားပါတယ်။ ကွန်မန့် ရေးမရလို့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းခဲ့နုိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါနော်။)
Posted by Iora at 9:13 PM
shwenyar tharlay March 2, 2014 at 4:49 AM
ဘေဘီ March 2, 2014 at 5:03 AM
ကင်းပုံသီးထင်တာပဲ အမ၀ယ်လာတာ :)
ကျမလည်း အိန္ဒိယန်းဆိုင်က ခဏခဏ၀ယ်စားဖြစ်တယ်
Iora March 2, 2014 at 6:09 AM
ကုိုယ်ကင်းပုံသီးတော့သိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတည်းကစားဖူးလို့ လေ။
ပြီးတော့အဲဒီနေ့ က ကင်းပုံသီးလည်းအတူတူဝယ်လာသေးတယ်။ ကင်းပုံသီးကသူ့ ထက်သေးတယ်။ အဲဒီမျိုးနွယ်တွေထဲကတော့ဖြစ်မယ်။း)
လာလည်လို့ ရယ် ကွန်မန့် ပေးလို့ ရယ် ကျေးဇူးနော်။း)
Iora March 2, 2014 at 6:03 AM
အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ တော်တော်လေးသိလုိုက်ရလုို့ ။ ဒါကြောင့်ရွှေညာသားလေးတော့သိမှာလို့ ထင်ထားတာ။
နောက်ထပ်အဆူးလေးတွေနဲ့ အသီးဝယ်ထားတာရှိသေးတယ်။ တင်တဲ့အခါကျနံမည်သိရင်ပြောပြပေးအုန်းနော်။
ဒီတခါအိမ်ပြန်ရင် အဲလိုလူသိနည်းတဲ့အသီးအရွက်လေးတွေဓါတ်ပုံရုိုက်လာပြီးတင်ပေးနုိုင်ရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။း))
ဘုံကလုံသီးဆုိုတာ ဘုံလုံသီးလိုမျိုးလား။ ကင်းပုံသီးလောက်အရွယ်ဘဲလား။
မီးမီးငယ် March 2, 2014 at 12:38 PM
Iora March 2, 2014 at 1:07 PM
ကုိုယ်ခုလောလောဆယ်ဖရုိုဇန်းအသီးတထုတ်ဝယ်ထားတာရှိတယ်။ မြန်မာလုိုဘယ်လိုခေါ်လည်းမသိဘူးရယ်။
အဲဒီနောက်ထပ်ဖရဲသီးလုိုလို ကဆစ်သီးလိုလို ၀ါတာတာနဲ့ အစိမ်းပြောက်တွေပါတဲ့အသီးကုိုတွေ့ နေတာ။ စမ်းသပ်မလို့ ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က လမ်းတွေပိတ်နေတာနဲ့ ချစ်ချစ်ကမြန်မြန်ပြန်ချင်နေတာနဲ့ ဘာမှစုံအောင်မ၀ယ်ခဲ့ရဘူးလေ။
ညီလင်းသစ် March 2, 2014 at 2:05 PM
ကဆစ်သီး ဋီကာဖတ်လိုက်ရတာ တော်တော်လေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိလိုက်ရပြီ…၊း)
Iora March 2, 2014 at 5:05 PM
ဟုတ်ပါ့..ကျမခေါင်းစဉ်တောင် ကဆစ်သီးဋီကာလို့ တပ်မလို့ သိပ်ကြီးကျယ်သလိုဖြစ်သွားမလားလို့ ...း)
Ma Tint March 2, 2014 at 6:25 PM
ကဆစ်သီးက ကင်းပုံသီးနဲ့ဆင်တယ်နော်... တီတင့်တော့ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ
ကဆစ်သီးဋီကာ ဖတ်ဖူးသွားပြီ.. ကျေးဇူးပါ Iora ရေ... :)
Iora March 2, 2014 at 6:43 PM
တကယ်တော့အုိုင်အိုရာတုို့ ကမြန်မာပြည်မှာသိပ်အလေးမထားခဲ့တာလည်းပါတယ်။ အစားအသောက်ဆုိုစားလုိုက်တာဘဲ။ မှတ်မှတ်သားသားမရှိဘူး ပုံမှန်စားလေ့ရှိတာကလွဲရင်။
ဟန်ကြည် March 2, 2014 at 9:53 PM
အညာသားမို့လားတော့ မသိဘူးဗျို့...ကဆစ်သီးဆိုတာကို ကြားလည်းမကြားခဲ့ဖူး မြင်လည်းမမြင်ခဲ့ဖူးတာတော့ သေချာသဗျ...း)
စံပယ်ချို March 3, 2014 at 7:45 AM
ခုထိ ကဆစ်သီး မစားဘူးဖူးသေးပါ စားတောင်စားချင်လာပြီ....
Iora March 3, 2014 at 9:40 AM
ဘာလို့ ဆုို ကုိုယ်က အထောင်းတုို့ ငပိချက်တုို့ ကြိုက်တော့လေ။
Iora March 3, 2014 at 9:18 AM
ရန်ကုန်သူမုို့ လားမသိ..ကဆစ်သီးကုိုလုံးဝမမြင်ဖူးဘူး...ကြားဖူးသလိုလိုတော့ရှိရဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ ရွှေညာသားလေးတုို့ အညာမှာလယ်ကွင်းထဲမှာခူးရတယ်ဆုိုတော့အညာစာတော့ဖြစ်မယ်။ ဆရာဟန်ကအညာဘယ်အရပ်လည်းတော့မသိ။
မရွှေဇင်ဦးတင်ပေးထားတဲ့ "လယ်တွင်းသား စောချစ် ၏ ငယ်ဘဝ (၁၅)" မှာကျောက်ဆည်ခရုိုင်ဖက်မှာနေတဲ့ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ ၀ါတွင်းဆုိုရင်နှမ်းခင်းတွေမှာကဆစ်သီးကောက်ထွက်ကြတယ်လို့ လည်းဖတ်ရတော့အဲဒီကျောက်ဆည်ဖက်မှာရလိမ့်မယ်။ စုက မန္တလေးမှာဝယ်စားတာတဲ့။ ဆရာဟန်ပြောတာနဲ့ ကျမတော့ အညာ ဆုိုတာဘယ်နေရာတွေလည်းဆုိုတာအတိအကျသိချင်လာပြန်ပြီ။ အဟီး..း)
မြတ်ကြည် March 4, 2014 at 6:37 AM
ကဆစ်သီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့ ဟီး
မြတ်ကြည် March 9, 2014 at 6:07 PM